Michael Grigsby's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Michael Grigsby
Mike Grigsby ave achibatanidzwa mukushambadzira sainzi kweanopfuura makore makumi maviri nemashanu. Akanga ari kushambadzira director director ku Millward shava uye akabata zvinzvimbo zvehutungamiriri kuHewlett-Packard neGap. Aine hupfumi hwechiitiko chevashandi kumberi kwekushambadzira sainzi uye data analytics, iye zvino anotungamira nzira yekuronga yekutengesa ku Targetbase.
Marcom Kuongorora: Imwe nzira kune A / B Kuedza
Chitatu, July 22, 2015 Chipiri, July 21, 2015 Michael Grigsby
Saka isu tinogara tichida kuziva kuti marcom (kushambadzira kutaurirana) iri kuita sei, zvese senge mota uye yeumwe mushandirapamwe. Mukuyera marcom zvakajairika kushandisa yakapusa A / B kuyedza. Iyi ndiyo hunyanzvi umo masampuli akasarudzika anogadzira maseru maviri ekurapa mushandirapamwe. Sero rimwe rinowana bvunzo uye rimwe sero harizodi. Wobva wapindura mwero kana mari yemari inofananidzwa pakati pemasero maviri Kana iyo yekuyera sero ichipfuura iyo inodzora sero